सुरक्षित हाेइन, कोरोनाको स्रोत बन्दै छन् क्वारेन्टाइन
काेराेना अपडेट स्वास्थ्य समाचार
दिनेश गौतम काठमाडौं, ९ जेठ
बाँकेमा क्वारेन्टाइनमा रहेका एक पुरुषको मृत्यु भयो । मृत्युको कारण कोरोना भाइरस भनियो । उनी बिरामी परेपछि अस्पताल लैजानसमेत ढिला भएको थियो । यदि मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टाइन भएको भए उनको उपचार क्वारेन्टाइनमै हुने थियो ।
कपिलवस्तुको एक क्वारेन्टाइनमा रहेका पुरुषले भने, ‘२० दिनभन्दा बढी भयो क्वारेन्टाइनमा बसेको । न कोरोना भाइरसको परीक्षण हुन्छ । न घर जान पाइएको छ ?’ किटको अभावले आफूहरूको परीक्षण हुन नपाएको उनले बताए ।
‘क्वारेन्टाइनबाटै सर्ने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘यदि कसैलाई भाइरस रहेछ भने नभएको व्यक्तिमा पनि सर्ने भयो ।’
कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइन बनाइएको हो । तर, मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टाइन नहुँदा कोरोना भाइरसको स्रोत नै क्वारेन्टाइन बन्न थालेको छ ।
संक्रमित पुष्टि भएका व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका र त्यस क्षेत्रका व्यक्तिलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारी मापदण्ड छ । क्वारेन्टाइनमा २४ घण्टा नै सुरक्षाकर्मी र एम्बुलेन्ससहितको स्वास्थ्यकर्मी पनि रहनुपर्ने हुन्छ ।
भाैतिक संरचना, एउटा रुममा कति राख्ने ? आपतकालीन अवस्थामा के गर्ने ? पोषणका लागि कस्तो खाना खुवाउने ? कति पटक खाना खुवाउने ? सबै मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, साे मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टाइन नहुँदा मान्छे भाग्नसमेत थालेका छन् ।
नेपालले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) अनुसारकै मामदण्ड बनाएको छ । मपदण्ड राम्रो छ । तर, क्वारेन्टाइन राम्रो छैन । यसले झन् संक्रमण फैलिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
‘संक्रमण नफैलियोस् भनेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. पदम सिम्खडाले भने, ‘नेपालका क्वारेन्टाइन नै कोरोनाको स्राेत बन्ने खतरा छ ।’
क्वारेन्टाइनमा बसेका राति घर जाने र बिहान क्वारेन्टाइनमा आउने गरेको समेत पाइएको छ । सुरक्षा र निगरानी प्रभावकारी नहुँदा क्वारेन्टाइन बसेकाहरू राति घर जाने र बिहान हाजिर गर्न क्वारेन्टाइन आउने गरेको पाइएको हो ।
‘राति घरमा जाने बिहान क्वारेन्टाइन आउने हो भने क्वारेन्टान्बाट भाइरस घरमा पुग्ने भयो,’ उनले भने, ‘घरमा रहेछ भने क्वारेन्टाइनमा आउने भयो । यसले झन् जोखिम बढाएको छ ।’
सबैलाई अस्पताल र क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्दैन
जो व्यक्ति संक्रमित छ । उसको सम्पर्कमा रहेका र प्रभावित देशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो । तर, अनावश्यकलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । क्वारेन्टाइनको क्षमताभन्दा बढी मानिस राखिएको छ । ८० प्रतिशतमा लक्षण पनि नदेखिने र सामान्य हुने भएकाले सबैलाई अस्पताल राख्नु नपर्ने डा. सिम्खडाले बताए ।
‘१ सय जनामा ८० जना सामान्य हुन्छन्,’ उनले भने, ‘२० जनामा १५ जनालाई अस्पताल राख्नुपर्ने हुन्छ । र, ५ जनालाई आइसोलेसन आवश्यक पर्छ ।’
भाइरस फैलिन नदिन सबैलाई अस्पताल
नेपालमा अहिले जति पनि संक्रमित छन्, ती सबैलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ । समाजमा भाइरस नफैलियोस् भनेर पहिलो चरणमा सबैलाई अस्पताल राखिएको हो ।
‘भाइरस नफैलियोस् भनेर पहिलाे चरणमा संक्रमित सबैलाई अस्पताल राखिएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले भने, ‘यदि संक्रमितको संख्या बढ्यो भने यसलाई परिवर्तन गर्छौं ।’
क्वारेन्टाइनलाई अस्पताल बनाइने
संक्रमितको संख्या बढेमा अस्पतालको बेडले धान्न नसके क्वारेन्टाइनमा नै संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने सरकारको योजना छ ।
संक्रमितको संख्या बढेमा अस्पतालको बेड अपुग भयो भने क्वारेन्टाइनमा भेन्टिलेटर र अक्सिजन राखेर उपचार गरिने उनले बताए ।
६१ हजार क्वारेन्टाइन
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर ६१ हजार २ सय ४५ क्वारेन्टाइन रहेका छन् । क्वारेन्टाइन नै मापदण्डअनुसारका छैनन् । अहिलेको क्वारेन्टाइनमा राखेर संक्रमितलाई उपचार गर्न नसकिने डाक्टर सिम्खडाले बताए ।
क्वारेन्टाइनमा पौष्टिक खाना भएन
क्वारेन्टाइनमा खानाको समस्याका कारण अरु रोग लाग्ने जोखिम बढेको छ । कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै पौष्टिक खाना नहुँदा इम्युनिटी पावर पनि घट्ने र अरु रोग लाग्ने डाक्टरहरू बताउँछन् ।
‘क्वारेन्टाइनमा पोषणयुक्त खाना छैन,’ डा. अरुणा उप्रेतीले भनिन्, ‘पौष्टिक खाना नभएकाले क्वारेन्टाइनमा बसेका पनि भाग्न थालेका छन् । यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ । ’
यस्तो छ सरकारी मापदण्ड ः
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ९, २०७७, १३:३६:००
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै, लकडाउन मोडालिटी परिवर्तन हुन सक्ने